Mibilaogy ny nofinofy: Manely ny Teny · Global Voices teny Malagasy
Mibilaogy ny nofinofy: Manely ny Teny
Voadika ny 10 Jona 2019 10:45 GMT
(Fanamarihana : Lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Janoary 2009)
Nahazo tosika kely ny tetikasan'ny Orizonturi Foundation “Mibilaogy ny nofinofy” tamin'ny Novambra rehefa nahazo fanasan'ny Soros Foundation i Gabriela Tanasan, mpitarika ilay tetikasa mba handray anjara tamin'ilay kaonferansa nokarakarain-dry zareo tao Bucharest, Romania, nitondra ny lohahevitra hoe “Fisoloana Vava Amin'ny Alàlan'ny Fanoratana Bilaogy“. Kaonferansa atrikasa fanofanana tafiditra amin'ny antsoina hoe Tranonkala 2.0 , ho an'ireo fikambanana tsy mikatsaka tombontsoa ao Romania.
Miorina ao an-tanànan'i Câmpulung Moldovenesc, Romania, hatramin'ny 1995 ny Orizonturi Foundation no efa nanampy ireo manana olana amin'ny fahasalaman'ny saina, amin'ny fanomezana ireo tolotra miainga avy amin'ny fanomezana torohevitra ka hatrany amin'ny fikarakarana fitsangantsanganana. Ny tetikasa “Mibilaogy ny nofinofy”, vatsian'ny famatsiambola madiniky ny Rising Voices, dia mirotsaka an-tsehatra manangana klioba fanoratana bilaogy ho an'ireo mpampiasa ny tolotra atolotr'izy ireo ho fitsaboana aretin-tsaina, ka ao ireo mpandray anjara no miofana amin'ny fomba famoronana sy fitantanana bilaogy, mampiasa aterineto, ary mampakatra lahatsary. Any amin'ny farany izy ireo dia hamorona bilaogy iray iraisany, izay antenain'ilay fikambanana fa hanampy amin'ny famotehana ny fitsaratsarampoana atrehan'ireo olona manana tsy fahasalamana ara-tsaina ao Romania, hatramin'ny famoronana fanentanana iray momba ny olan'izy ireo.
Tamin'ny Novambra, i Tanasan no nanao fampahafantarana ny tetikasa “Mibilaogy ny nofinofy” tao amin'ilay kaonferansa nokarakarain'ny Soros Foundation. Natrehany ihany koa ireo fotoana hafa toy ny “Fampiasàna ny fitaovan'ny media sosialy ho amin'ny fanentanana mahomby tsy ikatsahana tombontsoa,” ny “Torolalana Web 2.0 azo ampiharina ho an'ireo ONG,” sy ny “Tetikadim-pifandraisana mampiaty ho an'ireo ONG.” Faritan'i Tanasan ny zavatra niainany tao amin'ilay kaonferansa ary resahany ny fomba nataony ampiharana ny fahalalana vaovao azony mba hanasongadinana ity tetikasan'ny Rising Voices ity:
Fotoana iray lehibe fanararaotra ho ahy ny nandraisako anjara tamin'ilay kaonferansa nokarakarain'ny Soros Foundation mba hianarako sy hitarihako fifanakalozana traikefa momba ny fampiasana ireo fitaovana vaovaon'ny media.
Nitombo fahalalana aho momba ny famoronana sy fitantanana bilaogy. Nody niaraka tamina hevitra vaovao momba izay ametrahana ny tetikasanay “Mibilaogy ny nofinofy”. Ny fanontaniana mila apetratsika amin'ny tenantsika mba hanànana bilaogy iray fantatry ny rehetra, misy zavatra ifantohana ary ilaina, dia ny hoe : ‘Inona no tanjona voalohany ho an'ilay bilaogy?’, ‘Nahoana ny mpamaky no mety ho liana amin'ilay tanjona napetrany?’, Inona no tena tian'ny olona indrindra rehefa miditra anaty aterineto ry zareo: ny mamaky, mijery sary / lahatsary, mitroka saripika / kisarisary / torohay ve ?,’ ‘inona no tetika tokony horaisina mba hahatratrarana mpamaky betsaka kokoa ka ho tratra ny tanjontsika?” ary mbola azo tohizana ny andiam-panontaniana.
Hitan'i Tanasan koa hoe fotoana lehibe fanararaotra ilay kaonferansa mba hanelezana ny teny momba ny tetikasa “Mibilaogy ny nofinofy” any amin'ireo izay miasa eny an-kianja, sy koa hanairana ny olona ho tonga saina momba ny Orizonturi Foundation sy ny asa ataon'izy ireo. Fandrisihana goavana ireo tamberina miabo. Avy ao amin'ny bilaogin'ny tetikasa:
Mampientanentana ny mahita ny hafa liana amin'ireo ezaka ataon'ny tetikasanay, tsy lazaina intsony ireo fandrisihana sy ny tamberina voaray. Fanampin'izany, nivimbina torohay marobe i Gabriela momba ireo fitaovana fanampiny amin'ny fanaovana bilaogy izay efa tsy andrinay ny hametrahana azy nandritra ny Vanimpotoana Fianarana Asa nataonay.
Tapitra ny lafiny fiofanana teknika tamin'ny tetikasa “Mibilaogy ny nofinofy”, fotoana nianaran'ireo mpandray anjara ny fomba fanoratana bilaogy, ny fampiasàna fakantsary nomerika ary ny fampakarana sary. Efa manomana tsikelikely ny bilaoginy izao ireo mpandray anjara. Dingana manaraka amin'ny tetikasa ny vanimpotana fianarana asa. Mandritra io fotoana io ireo mpikambana ao anatin'ilay klioba fanoratana bilaogy no hihaona isankerinandro sy hanatontosa tetikasa mba hampisehoana izay nianaran-dry zareo hatreto. Ho ampiasain-dry zareo ihany koa io fotoana io mba hivoarana bebe kokoa sy hifankahazarany tsara amin'ny bilaogin-dry zareo. Ambaran'i Tanasan fa mandritra io vanimpotoana ao anatin'ny tetikasa io dia ho ampihariny izay nianarany nandritra ny kaonferansa nokarakarain'ny Soros Foundation :
Hanomboka ny vanimpotoana fianarana asa amin'izay ireo mpandray anjara amin'ny tetikasa “Mibilaogy ny nofinofy” , ny 15 Janoary 2009. Ho arahantsika maso akaiky ireo endrika rehetra voalaza momba ny famoronana bilaogy ho an'ny isambatan'olona, ary avy eo ny bilaogy itambarambe. Ny bilaogy dia tokony horaisina amin'ny maha-‘tontolom-pifandraisana irasain'ny rehetra’ azy , toerana iray ifamotoanan'ny vaovao sy iaingan'izy ireny indray avy eo. Ny vanimpotoana fianarana asa dia manome ahy ny vintana hampihatra ireny hevitra ireny.
Antsafa 7 andro izay
Antsafa 2 herinandro izay